मनाइयो संविधान दिवस, कहिले पुरा हुने जनतामा बाढिएका आश्वासन ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » मनाइयो संविधान दिवस, कहिले पुरा हुने जनतामा बाढिएका आश्वासन ?
मनाइयो संविधान दिवस, कहिले पुरा हुने जनतामा बाढिएका आश्वासन ?
संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएपनि जनताको जीवनस्तरमा अझै उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षा नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप पुरा हुनेगरि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता भने पाएको छ । संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ । मौलिक हकका अधिकांश कानूनहरु बनेपनि नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका प्रायः कानूनहरु बनिसके पनि कार्यान्वयनको पाटो आशा गरेजस्तो सकारात्मक देखिएको छैन । बेलाबेलामा उठ्ने संविधान संशोधनका आवाज समेत लामो समयदेखी सम्बोधन हुन सकेका छैनन ।